MyChart 8.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ MyChart
MyChart ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
MyChart သင်သည်သင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်တွေကို, ချိန်းသတင်းအချက်အလက်, လက်ရှိဆေး, ကာကွယ်ဆေးထိုးသမိုင်း, နှင့်သင့်မိုဘိုင်း device ကိုပိုပြီးဖို့ access ကိုပေးသည်။
သင်သည်တတ်နိုင် MyChart နှင့်အတူ:
• Access ကိုသင့်မိသားစုကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်
သင်ပထမဦးဆုံး MyChart မှတဆင့်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစျဆငျ့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်. သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူစာရင်း, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လက်ရှိအကောင့်ကိုရယူသုံးထောက်ခံမှုလိုအပ်လျှင်, MyChart app ကိုမှတဆင့်သင့်အကောင့်ကိုရယူသုံးအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါမပေးပါ။
သင်သည်သင်၏ MyChart app ကို upgrade သတိပေးခံရနေကြတယ်ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုမတှေ့နိုငျလြှငျ, updates များကိုလက်ခံရရှိရန်ကို Android 5.0 (Lollipop) သို့မဟုတ်မြင့်မားရန်သင့် device ကို upgrade ပေးပါ။
MyChart အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MyChart အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MyChart အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MyChart အား အခ်က္ျပပါ
mysloflin စတိုး 10 13.59k
MyChart ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MyChart အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.9
ထုတ်လုပ်သူ Health New England
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.epic.com/about/privacypolicies
App Name: MyChart
Release date: 2019-08-16 01:45:35
လက်မှတ် SHA1: 0E:96:9C:EC:B0:63:23:D7:D5:28:C7:71:2F:FC:64:61:9A:C9:07:9C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Epic
အဖွဲ့အစည်း (O): Epic Systems Corporation
နယ်မြေ (L): Verona
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): WI
MyChart APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ